“बसभित्र सह’चालकको ह’ त्या!:: Mero Desh
“बसभित्र सह’चालकको ह’ त्या!
Published on: १९ भाद्र २०७८, शनिबार ०५:३२
काठमाडौं को स्यु’चाटारमा रोकेर राखेको बसभित्र सह–चालकको ह’ त्या गरेर भागेको आ’ रो’पमा प्रहरीले एकजना किशोरलाई प’क्रा’उ गरेको छ भने प’क्रा’उ पर्नेमा गोरखाको सिरानचोक गाउँपा’लिका– ६ घर भएका १८ व’र्षीय सुरेश ’ प’रियार छन् । र २०७८ सा’उन २८ मा साँझ सा’ढे ६ बजे
रो’किराखेको बा४ख ४२१ नम्ब’रको बसमा १९ वर्षीय रमेश खत्रीको ह’ त्या गरिएको थियो’। मृ’ तक चक्रपथ परिक्रमा गर्ने सोही बसका सहचालक हुन्। ह’त्या आ’रोपी लाई महानगरीय अ’परा’ध महाशाखा र महानगरीय प्रहरी वृत कालिमाटीबाट खटिएको टोलीले पोखराकाे बसपार्क बाट प’ क्रा’उ गरेर
काठमाडौं ल्याएको हो ।सिन्धुपाल्चोकको चौतारा घर भएका खत्रीलाई सुरेशले ढुं’गाले हि’र्काएर ह’त्या ग’रेको महानगरीय प्र’हरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी रमेश बस्नेतले ब ताए । ज्याकेट भित्र ढुं’ गा बेरेर हि’र्काएर उनले ह’त्या गरेका थिए।
त्यसपछि मृ’तकको कपडा र मोवाइल बोकेर उनि फ’रार भएका थिए। उ’नलाई ज्या’नमा‘रा सम्बन्धि क’सुरमा म्याद लिएर म’हानगरीय प्रह’री वृत कालिमाटीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
यो पनि पढ्नुस दोहा : नेपाली श्रमिक को प्रमुख श्रम गन्तव्य रहेको कतारमा को’रोना संक्र’मितको संख्या घट्दो देखिएको छ । कतारमा सोमबार २०५ जनामा सं’क्रमण पु’ष्टी भएको थियो भनेपछिल्लो २४ घण्टामा १७३ जनामा नयाँ सं’क्रमण भेटिए को छ” । यो सँगै कतार मा कोरो’ना
सङ्क्र’मितको संख्या २ लाख ३२ हजार ७४४ पुगेको पनि कतारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । यस अवधिमा २७७ जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किए “सँगै अब” को’रोना बाट निको हुने को सङ्ख्याहरु २ लाख २९ हजार ५२३ पुगेको छ भने संक्रम’णबाट अहिलेसम्म ६०२।
जनाको मृ’त्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म कतारमा २ हजार ६१९ वटा ‘ए’क्टिभ’ केस रहेका छन् भने ८४ जनायहाँको विभिन्न अस्पतालहरुमा उपचार गराइरहेका छन् ।
तीमध्ये २४ जनाको आई’सीयूमा उपचार भइरहेको छ ।
अहिलेसम्म को’रोनाबाट कतारमा २४ नेपाली श्रमिकले ज्यान गु’माएको दोहास्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।
अहिलेसम्म कतारमा ४४ लाख ३८ हजार २१० डोज खो’प वितरण गरिसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कतारले आफ्ना नागरिकसहित अन्य आप्रवासी श्रमिक हरुलाई पनि नि:शुल्क रुपमा खोप लगाउँदै आएको छ ।